Novambra 9, 2014
Iza isika ary inona no tanjon'ity politika momba ny fiainana manokana ity?
Ity fitsipika tsy miankina ity dia mamaritra ny fomba ampiasan'ny MH Industry ("MH", "izahay" na "izahay") sy miaro ny fampahalalana manokana omenao anay rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ianao.
Ny fampahalalana manokana dia fampahalalana izay afaka mamantatra anao ho toy ny olona velona, ​​na amin'ny tenany na amin'ny fampiasana miaraka amin'ny fampahalalana hafa izay azontsika na mety hitazonana izany. Manazava ny fomba ampiasanay sy ny fiarovana ny fampahalalana manokana atolotray anareo rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ity politika momba ny tsiambaratelo ity.
Raha manana fanontaniana ianao mikasika ity politika momba ny fiainana manokana ity na ny fampiasanao ny mombamomba anao manokana, miangavy anao izahay. Alefaso azafady amin'ny fizarana hoe "Ahoana no ifantohanay" eto ambany. Ao amin'io fizarana io no nametrahanay ny adiresinay, ny nomeraonay sy ny adiresinay mailaka.
Ahoana raha tsy mahasambatra anao amin'ity politika ity ianao?
Raha tsy manaiky ny fampahalalana manokana ampiasainao mifanaraka amin'ity politika manokana ity ianao dia tokony hiala amin'ny fampiasana ity tranokala ity avy hatrany. Mariho fa tsy ho afaka hividy entana na serivisy avy amina tranonkala ianao raha tsy manolotra fampahalalana manokana ho anay, mba hahatonga anao ho voasoratra anarana hampiasa ity tranonkala ity ary mba hahafahantsika mandamina ny baiko.
Ahoana ny momba ireo vaovao farany amin'ity politika ity?
Azonao atao ny manova fotoana vitsivitsy amin'ity politika ity. Tokony hijery tsy tapaka ity pejy ity ianao. Ny fampiasanao tsy tapaka an'ity vohikala ity rehefa vita ny fanovana natao tamin'ity politika momba ny fiainana manokana ity dia tokony horaisina mba hanondroana fa efa namaky sy nanaiky fiovana ianao. Tsy tokony hampiasa ity tranokala ity ianao raha tsy faly amin'ny fiovàna amin'ity politika manokana ity ary tokony hilaza aminay raha ireo fiovana ireo dia midika fa tsy sambatra intsony ianao amin'ny fomba fampiasanao ny angona manokanao.
Inona no fampahalalana manokana ananantsika?
Raha anisan'ireo mpanjifanay ianao (anisan'izany ny mpanjifa sy ny mpanjifa) ary raha manoratra ny pejy sasany amin'ny tranonkala ianao (ohatra) mba hividianana entana sy serivisy avy aminay, dia omena anao ny pejy . Azontsika atao ny manangona ny mombamomba anao manokana ao anatin'izany fisoratana anarana izany; amin'ny ampahany amin'ny fandaminana filaminana an-tserasera; ary mba hahazoana ny fanekenao hahafahanao mivarotra mivantana anao. Ny fampahalalana manokana azontsika avy aminareo dia mety ahitana:
ny anaranao, ny daty nahaterahana sy ny fampahalalana amin'ny fifandraisana (toy ny adiresy imailaka sy e-mail (es) ary nomeraon-telefaon (s));
fampahalalana momba ny niainanao tamin'ny vokatra sy ny tolotra;
Ny ID mpampiasa anao MH (izay hanome anao ny Coats) sy ny tenimiafinao (izay hotohizanao). Hangataka ny hanome ny ID sy ny fampiasa anao ianao isaky ny miditra amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity);
ny fidiranao mivantana amin'ny fifandraisanao mivantana sy ny fifanekena (jereo ny fizarana "Direct Marketing" etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny);
ny antsipiriany momba ny karatra / debit; ary
(raha ny momba ny mpanjifa ihany) ny antsipiriany momba ny raharahanao sy ny asany, izay mety ahitana fampahalalana manokana.
Ity lisitra ity dia tsy mahafa-po ary mety havaozina amin'ny ho avy. Izany dia fandinihana ara-drariny ny sasany amin'ireo fampahalalana manokana azontsika anananao amin'izao fotoana izao.
Inona no ataontsika amin'ny fampahalalana manokana izay angonintsika?
Hampiasa ny fampahalalana manokana ataonareo izahay mba hanaovana tanjona ara-drariny, ohatra:
mba hitantana an'ity tranonkala ity sy ny fifanarahana na fifandraisana hafa miaraka aminao, anisan'izany ny hanomezana ny vokatra sy ny serivisy ho anao;
hamakafaka ny fomba ampiasanao an'ity tranonkala ity ho fampivoarana ny vokatra sy ny tolotra omenay ary ny hetsika ara-barotra sy ny dokam-barotra ary ny tontolon'ny fikarohana ara-tsosialy mifandraika amin'ny fanatsarana izany (afaka miresaka amin'ny tenanao manokana ianao na mandefa antoko fahatelo mba hanaovana izany amin'ny anaranay - jereo ny fizarana hoe "Iza no mizara ity fampahalalana ity amin'ny" eto ambany);
miatrika sy mandray andraikitra amin'ny fifampiresahana, fangatahana na fampiharana izay ampanaovinao anay;
ny mandefa mivantana anao mivantana momba ny vokatra sy ny tolotra (fa raha tsy manome ny fifanekena mety aminao ianao dia azonao atao ny mijery ny fizarana "Direct Marketing" etsy ambany); ary
mba hanarahana ny adidintsika ara-dalàna, ara-dalàna ary ireo andraikitra tsara hafa amin'ny fitantanana.
Ity lisitra ity dia tsy mahafa-po ary mety havaozina amin'ny ho avy. Izany dia fandinihana ara-drariny ny sasany amin'ireo tanjona misy ankehitriny izay azontsika ampiasaina ny fampahalalana manokana nataonareo amin'ny alalan'ity tranonkala ity.
Iza no mizara ny mombamomba anao manokana?
Ankoatra ny voalaza etsy ambany, tsy handefa, hampahafantarana, hivarotra, hizara na handoa ny mombamomba anao manokana amin'ny antoko fahatelo (izay midika hoe olona hafa na fikambanana) raha tsy mahazo alalana izahay na avela hamoaka izany amin'ny lalàna na lalàna.
Azontsika atao ny mivarotra ny mombamomba ny olona manokana na ny fikambanana raha ilaina izany ho ampahany amin'ny fizotran'ny raharaham-barotra ara-drariny (oh: amin'ny tranga izay handraisan'ny fitantanana ivelany ny fitantanana na ny fitantanan-draharaha). Tokony hanao izany ve isika fa ho tanteraka izany araka ny Lalàna.
Azontsika atao ny mandefa lalàna na fepetra araka ny lalàna hamotsorana ny mombamomba anao manokana amin'ireo manampahefana ara-dalàna (izany hoe fitsarana, fitsarana, polisy na sampan-draharaham-piarovana). Mba hitazonana ny fahamarinan'ity tranonkala ity ary hiaro ny tombotsoan'ny mpanjifany sy ny mpanjifany, dia hanaraka izany fangatahana izany isika. Ankoatra izany, mety takiana amintsika ny hampahafantatra ny mombamomba anao manokana amin'ny manampahefan'ny governemanta amin'ny hetra na tanjona hafa. Amin'ny toe-javatra hafa dia mety hanapa-kevitra ihany koa isika fa misy antony marina tokony hamoahana ny mombamomba anareo manokana amin'ireo manampahefana ara-dalàna ary ny fampahalalana dia azo hamarinina sy ara-dalàna araka ny lalàna.
Ny fampahalalana manokana ataonao manokana dia mety ho azon'ny orinasa rehetra ampiasaina ao amin'ny vondrona MH, ary ny sasany amin'ireo dia ivelan'i Shina. Ho an'ny orinasa hafa ihany no hizarantsika ny mombamomba anao manokana mba ahafahan'izy ireo mamolavola azy mba hanomezana tolotra ho antsika.
Ankoatr'izany dia mety hisy toe-javatra izay ilaintsika ny mampahafantatra ny mombamomba ny tena manokana amin'ny orinasa na fikambanana ivelany mba hiarovana ny mpanjifantsika na ny tombontsoantsika ara-drariny. Ny fampahalalana toy izany dia havela araka ny Lalàna nomena azy ireo mba hiarovana ireo tombontsoa ireo ary dia mitovitovy amin'ny zavatra mahaliana anao.
Halefa any ivelan'i Sina ve ny fampahalalana manokana ataonao?
Ny angona angoninay avy aminao dia mety ho entin'ny mpiasa miasa ivelan'ny China izay miasa ho anay na iray amin'ireo mpamatsy anay. Ny mpiasa toy izany dia mety ho tafiditra ao, ankoatry ny zavatra hafa, mitazona ny angon-drakitrao manokana, ny fahatanterahan'ilay baiko, ny fanodinana na ny antsipiriany momba ny karama ary ny fanomezana fanampiana. Amin'ny alalan'ny fandefasana ireo angona manokana ataonao, dia manaiky an'io famindrana io ianao, manangona na manara-maso. Horaisinay avokoa ny dingana rehetra ilaina mba ahazoana antoka fa ny fitanana ny angon-drakitra dia arotsaka am-pahamendrehana sy mifanaraka amin'ity politika manokana ity.
Ny toerana nomenay anao (na ny toerana nofidianao) tenimiafina iray izay ahafahanao miditra amin'ny faritra sasany amin'ny tranokalanay dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana tsiambaratelo ity tenimiafina ity. Mangataka anao tsy hizara tenimiafina amin'ny olona iray izahay.
Mampalahelo fa tsy azo antoka tanteraka ny fampitaovana vaovao amin'ny Internet. Na dia hanao izay tsara indrindra vitantsika aza isika mba hiarovana ny angona manokana, dia tsy afaka manome toky ny fiarovana ny angon-drakitra nalefa tamin'ny tranokalantsika; Ny fampitaovana dia mety ho tratranao. Raha vao nahazo ny fampahalalana nataonareo izahay, dia hampiasa fepetra hentitra sy fiarovana mafonja izahay mba hiezahana hanakana ny fidirana tsy nahazoan-dalana.
Ahoana raha mampiasa io tranonkala io ivelan'ny China ianao?
Raha mampiasa ity vohikala avy any ivelan'i Shina ity ianao, ireo lalàna hafa dia azo ampiharina amin'ny fanitsiana ny mombamomba anao manokana. Miasa eto amin'ity tranonkala ity isika avy any Sina. Tsy manaiky ny lalàn'ny firenena eo an-toerana izahay ary tsy mety ny mifanaraka amin'ireo lalàna ireo. Tsy tokony hanome ny mombamomba anao manokana ianao raha tsy faly amin'ny toerana misy anao.
Ahoana ny amin'ny fampahalalana tsy fantatra?
Azontsika ampiasaina ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ny seha-pifaneraserana (izany hoe mety tsy ho fantatry ny mpanjifa tsirairay) ny tanjom-pivarotana ara-barotra sy ny fampandrosoana. Io fampahalalana io dia tsy mametraka ny mombamomba anao manokana satria tsy fantatrao na fantatrao avy amin'izany. Midika izany fa na ny fampiharana io politika momba ny tsiambaratelo io na ny lalàna.
Mba hisorohana ny tsy fahazoana alalana na ny famoahana, ny fahasimbana na ny fatiantoka momba ny mombamomba anao manokana, dia mandray fepetra ara-batana sy elektronika, organisation ary ara-teknika izahay amin'izany, araka ny adidinay amin'ny Lalàna. Anisan'izany ny fanoratana (ohatra, ity tranonkala ity dia tranokala azo antoka ary azo alefa amin'ny tranonkala ity).
Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny tsiambaratelonao amin'ny ID sy ny tenimiafinao izay mifandray amin'ny fidirana amin'ny pejy sasantsasany amin'ity tranonkala ity sy / na ny kaonty napetrakao miaraka aminay. Manaiky ny hanaiky ny andraikitra amin'ny hetsika rehetra mitranga amin'ny iray mitovy. Tsy tokony hamela ny olon-kafa hampiasa ny mpampiasa anao ianao na ny tenimiafinao. Azafady mba mifandraisa aminay maimaim-poana amin'ny antsipiriany ao amin'ny fizarana hoe "Ahoana no ifantohanay" eto ambany raha inoanareo fa ny kaontin'ny mpampiasa anao na ny tenimiafina dia mety ho marimaritra iraisana. Tsy ho tompon'andraikitra izahay raha toa ka misy fahazoana tsy nahazoana alalana avy amin'ny antsipirihanao momba ny fanamafisana na zavatra tsy nahazoana alalana ato amin'ity tranonkala ity noho ny antsipirian'ny rakitrao momba anao izay fantatra amin'ny olon-kafa, raha tsy noho ny tsy fahampian-tsainay izany.
Na eo aza ny ezaka ataontsika mikasika ny filaminana dia zava-dehibe ny mitadidy fa ny Internet dia tsy fitaovana azo antoka amin'ny fifandraisana. Ny fampitam-baovao manokana amin'ny aterineto dia mety ho tafiditra amin'ny hafa. Tsy afaka manome toky ny fiarovana ny mombamomba ny mombamomba anay izahay amin'ny alalan'ity tranonkala ity. Manaiky ianao fa mampiasa an'ity tranonkala ity amin'ny loza mety hitranga aminao.
Ity tranonkala ity dia tsy natao hampiasain'ny ankizy tsy ampy taona ao anatin'ny taona 13 ary noho izany dia mangataka isika fa ireo zaza tsy ampy taona manakaiky ny taona 13 dia tsy manolotra fampahalalana manokana ho antsika amin'ny alalan'ity tranonkala ity. Manoro hevitra ny hampahatsiahy ny ray aman-dreny sy ny mpiambina ny zanany mba handrindra ny angon-draketrany manokana amin'ny Internet.
Ity tranonkala ity dia ahitana rohy amin'ny tranonkala hafa. Ankoatra izany, ireo tranonkala hafa ivelan'ny fifehezantsika dia mety hifandray amin'io tranonkala io. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fomba amam-panao sy ny votoatin'ireo tranonkala hafa isika. Tokony hanao fampitandremana ianao ary jereo ny fanambarana amin'ny fiainana manokana momba ny tranonkala.
Azontsika atao ny mampiasa "cookies" ao amin'ny tranokalantsika. Cookies dia tahirin-tsarimihetsika izay mitahiry ny mombamomba ny fiara na navigateur izay midika fa ny tranokalanay dia afaka manaiky fa efa nitsidika ny tranokalanay taloha ianao. Mora kokoa aminao ny mihazona ny safidinao ao amin'ity tranonkala ity, ary amin'ny fahitana ny fomba ampiasanao ny vohikala, dia afaka mampifanaraka azy amin'ny safidy tianao sy ny fampiasanao izany.
Azonao atao, raha tokony hifidy ianao, dia esory ny cookie ao amin'ny navigateur ary esory ny cookies rehetra misy ao amin'ny ordinateranao. Ao amin'ny Microsoft Internet Explorer, azo atao izany amin'ny fisafidianana ny 'Tools / Internet Options' ary ny famerenana ny safidinao manokana na ny famaranana 'delete cookies'.
Azonao atao ny mamantatra ny fomba hanaovana izany amin'ny navigateur manokana anao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny 'fanampiana' ao amin'ny menio misy anao. Na dia izany aza, maro amin'ny tranonkalanay no tsy miasa raha toa ka manaisotra cookies ianao.
Azontsika atao ihany koa ny mampiasa sary elektronika antsoina hoe "même web" ao amin'ity tranokala ity ary amin'ny fifandraisana avy amin'ny fampiasana sy / na fisoratana anarana ato amin'ity tranonkala ity, toy ny mailaka fampiroboroboana. Ny tsiro-tranonkala dia matetika miasa miaraka amin'ny cookies ary ampiasaina amin'ny tanjona mitovy amin'izany.
Anisanay ny lisitra feno amin'ny cookies ampiasaina amin'ny mh-chine.com etsy ambany, miaraka amin'ny famaritana ny ampiasan'ny cookie. Ny Coats dia tsy mampiasa cookies mba hanangonana fampahalalana manokana momba anao.
Ny mh-chine.com dia mampiasa ny Google Analytics, tolotra web analytics nomen'ny Google, Inc. Ny Google Analytics dia mametraka cookie iray mba handinihana ny fampiasana ny tranokalanay ary hanangona ny tatitra momba ny fampiasana ny mpampiasa.
Google dia mitahiry ny vaovao nangonin'ny cookie amin'ny servisy any Etazonia. Google dia mety handefa izany vaovao izany any amin'ny antoko fahatelo izay takiana amin'izany hanao lalàna, na ireo antoko fahatelo toy izany dia mandrindra ny fampahalalam-baovao amin'ny Google. Google tsy hampifandray ny adiresy IP miaraka amin'ny angon-drakitra hafa nataon'i Google. Amin'ny fampiasana mh-chine.com, manaiky ny fanodinana ny angona momba anao amin'ny Google ianao amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza etsy ambony.
Ny mh-chine.com dia mampiasa mpamatsy maro izay mametraka ny cookies ao amin'ny tranokalantsika amin'ny anaranay mba hanolorana ireo tolotra omeny. Lisitr'ireo cookie rehetra hafa rehetra izay ampiasaina amin'ny mh-chine.com ary ny zavatra ampiasaina ho hita etsy ambany.
Fanavaozana sy fahazoana mivezivezy na dika mitovy amin'ny mombamomba anao manokana
Raha toa ka tsy misy daty na tsy marina ny fampahalalana manokana omenao anay dia ampahafantaro anay amin'ny alàlan'ny fanangonana anay amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny fampiasana ny antsipiriany ao amin'ny fizarana hoe "Ahoana no ifandraisana aminay" eto ambany.
Raha te hahazo fahazoana mivezivezy na dika amin'ny fampahalalana manokana momba anay ianao dia mifandraisa aminay amin'ny fomba mitovy.
Raha azo ampiasaina amin'ny tanjom-pamokarana mivantana ny fampahalalana manokana ataonao, dia hampahazava azy ireo amin'ny pejy manan-danja ato amin'ity tranonkala ity. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia hitady ny fanekenareo handray marketing mivantana izahay na hamela anao handao izany amin'ny fandraisana izany (miankina amin'ny zavatra takiana amin'ny lalàna manan-kery).
Ao amin'ny fivarotana mivantana an-tariby na amin'ny mailaka, SMS, voicemail na metaly hafa elektronika no hanomezantsika ny fomba tsotra handoavana ny fivarotana mivantana amin'ny alalan'ny fomba fiasa. Raha mandà ny fivarotana elektronika hafa ianao, dia tsy voatery hanaisotra ny mombamomba anao manokana avy amin'ny tahirin-tserasera izahay fa raha vao haingana dia haingana dia ho hitantsika fa nanova ny sainao. Midika izany fa mety mbola mitazona ny mombamomba anao manokana ianao (anisan'izany ny antsipirihanao amin'ny antsipiriany) amin'ny endrika reraka, mba hahazoana antoka fa tsy mifandray aminao intsony ianao.
Raha amin'ny fotoana hafa dia irinao ny hanova ny sainao momba ny fandraisana mivantana marketing ianao dia mety miala amin'ny fotoana rehetra. Hanao izany ianao amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny safidinao amin'ny alàlan'ity tranonkala ity na amin'ny fifandraisanao amin'ny mailaka na lahatsoratra amin'ny fampiasana ny antsipiriany ao amin'ny fizarana hoe "Ahoana no ifandraisanay" eto ambany.
Famaranana ny kaontinao sy ny fihazonana ny mombamomba anao manokana
Araka ny Lalàna dia ho antoka fa ny fampahalalana manokana anareo dia tsy voatazona mihoatra noho ny nilaina ho an'ny tanjona voatanisa avy amintsika na avy amin'ireo antoko fahatelo izay handrindra izany ho antsika.
Manakana ny zo tsy handà ny fanompoana na hamarana ny kaontinao izahay raha tsy misy filazana mialoha.
Raha hamarana ny kaontinao na manafoana ny kaontinao ianao, dia hanakatona azy io raha vao vita izany araka ny tokony ho izy ary hitazona ny mombamomba anao manokana raha tsy izany raha ilaina izany raha misy olana ara-pitsarana na olana hafa. Aorian'io vanim-potoana io, ny fampahalalana manokana anao dia hosoloina na afahana amin'ny tahirin-kevitra (s).
Ny lalàna dia manome anao ny zo hahazo ny vaovao voaray momba anao. Ny zon'ny fahazoana miditra dia azo ampiasaina araka ny Lalàna. Ny fangatahana fidirana dia mety hilefitra amin'ny £ 10 mba hamenoana ny sarany amin'ny fanomezana anao ny antsipiriany momba ny fampahalalana hitantsika momba anao.